Ukuthengisa kwi-Mac mini, kunokwenzeka ukuba uvuselele izixhobo? | Ndisuka mac
Kwiinyanga ezidlulileyo sifumene uninzi lweendaba ngokunxulumene nokuhlaziywa kweMac.Mhlawumbi, olu hlaziyo luye lwaqala nge-2016 MacBook Pro.Iqhubekekile ngolwazi oluvela kubunkokheli be-Apple, malunga nokuvuselelwa kweMac Pro kunye ukubakho kweMac Pro, eya kuthatha indawo yeMac 5k yangoku. Nangona kunjalo, sinolwazi oluncinci ngokubhekisele kuluhlu olusezantsi lweMacs.Ukuza kuthi ga ngoku, ikamva leMacbook Air, kunye neMac mini, ayaziwa.
Kulungile ukuba iApple ivuselele iMac mini amaxesha ngamaxesha. Okokuqala, kuba liqela lokungena labo bonke abo bafuna ukuzama iMac, kwaye bathathe isigqibo sokuba iyabakholisa, sebenza kwiMacOS kwaye ukhethe iqela elinempawu ezininzi. Kwaye okwesibini, sisixhobo esifanelekileyo kwabo bathanda ukuba neMac kodwa bakhethe ukuyenza ngokwezifiso isikrini, ikhibhodi, njl.
Namhlanje sazi njenge imiphezulu enkulu Baye banciphisa phakathi kuluhlu lweMac mini ngee-euro ezingama-160, engaphantsi ngama-20%. Liqela elinamandla, elinika nokunxibelelana okuninzi. Ngaphezulu kwe- € 600 sineMic mini ene-5 GHz i2,6, 8 Gb ye-RAM kunye ne-1 Tb HDD. Okokugqibela kukuphela kwento esezantsi kwiqela: I-Apple ithatha ixesha elide ukuvuselela iMac Mini, esanyusa i-HDD. Kuphela liqela eliphezulu-kuluhlu oluphakamisa iFusion Drayivu.
Nangona kunjalo, eSisixhobo esihle kakhulu sokwenza umsebenzi we-ofisi yemihla ngemihla okanye njengesixhobo esiphambili sosapho lonke. Kucacile ukuba sele liqela elineminyaka ethile, kwaye oku kuyathethelela ukunciphisa ixabiso. Nangona kunjalo, abathengisi abaninzi banquma ukunciphisa ixabiso xa benoluhlobo oluthile lolwazi lokuhlaziya izixhobo. Ixesha lamva, Xa kusele iiveki ezimbalwa kwi-WWDC, ubuza ukuba ngaba u-Apple uza kugqiba ekubeni asibonise silindele ukuhlaziywa kwe-Mac mini, ke ngokuqhubeka nesithembiso sokuhlaziya uluhlu lweMac kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukuthengisa kwi-Mac mini, kunokwenzeka ukuba uvuselele izixhobo?
Ewe, sele beyilayishiwe, ukunciphisa akukahlali ixesha elide 🙁